नेपालमा मुटु सर्जरीको जग हाल्ने डाक्टर
भदौ १, २०७४ बिहिवार ११:४४:००
कुनै समय सामान्य क्लिनिकका रुपमा सुरु भएको अहिलेको हिमाल अस्पतालका संस्थापक हुन् डा. लोकविक्रम थापा। तर, नेपालको चिकित्सा इतिहास नियाल्ने हो भने उनी निजी क्षेत्रको विकासमा मात्र अग्रसर देखिँदैनन्, केही उदाहरणीय कार्यमा जोडिएका भेटिन्छन्। बेलायतबाट एफआरसीएस गरेका यी...
बिरामीलाई आफन्त ठान्ने सर्जन
साउन २७, २०७४ शुक्रवार १७:०२:००
‘कसरी चिर्न सकेको हो ! मन सिरिङ्ग हुँदैन ?’ सर्जनले सामान्यतया आफन्त तथा साथीभाइबाट यस्तै प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । सर्जरी अर्थात् मानव अंगको चिरफार गर्ने काम । बिरामीको ज्यान चिरफार गर्ने सर्जन भन्ने बित्तिकै धेरैलाई ‘निर्दयी’ लाग्न सक्...
असार २४, २०७४ शनिवार १७:०३:११
डा. हरिगोविन्द श्रेष्ठलाई नेपालका प्याथोलोजिस्टहरु ‘फादर अफ प्याथोलोजी’ भन्छन् । उनी नेपालको पहिलो प्याथोलोजिस्ट भएकैले मात्र यो उपमा दिइएको होइन । नेपालमा प्याथोलोजी विशेषज्ञतालाई फुलाउने, फैलाउने काम पनि उनैले सुरु गरेका हुन् । उमेरले ७३ वर्षको उकालो हि...
न्युरो सर्जरीकी महिला डाक्टरको अनुभूती
असार २१, २०७४ बुधवार १६:३८:००
नेपालमा डाक्टरको स‌ंख्या २० हजारको हाराहारीमा पुगिसक्यो । यसमा महिला डाक्टरको संख्या करिब सात हजार छ । तर, सर्जन महिलाको संख्या दुईपल्ट औँला भाँच्दै गन्ने हो भने पूरा हुन्छ । अर्थात् २० जना जति । त्यसमाथि सर्जरीमा स्पेसियालिटी रोज्नेको संख्या अझै न्यून छ । यसका पछाड...
असार ६, २०७४ मगलवार १५:४५:००
करिब चार दशकअघि परिवारले राजधानी पढ्न पठाउँदा पनि बरालिएर हिँड्न थालेपछि गाउँ फर्काएर घाँस–दाउरा, मेलापात र गोठालो जीवनमा हराइरहेको युवा नेपालकै नामी डाक्टर बन्ला भन्ने कसैले सोचेको थिएन । न त स्वयं त्यो युवाले नै यसबारे दुरदृष्टि राखेको थियो । तर, जीवनमा...
युरोलोजी सेवा सुरु गर्ने डा. मास्केको यस्तो छ डाक्टरी यात्रा
असार २, २०७४ शुक्रवार २३:०५:००
नेपाल युरोलोजिकल सर्जन्स सोसाइटीले केही दिनअघि मात्रै नेपालमा युरो सर्जरीको सुरुवात गरेको भन्दै दुईजना वरिष्ठ चिकित्सकलाई सम्मानित गर्‍यो। तिनैमध्येका एक हुन् डा. सिपी मास्के। नेपालमा युरोलोजी सर्जरी, पिसाब सम्बन्धी उपचार सेवा सुरु गर्ने र फैलाउने मध्येमा पर्छन् उनी।...
जसले २० हजारभन्दा बढीको शल्यक्रिया गरिसके
जेठ २०, २०७४ शनिवार १८:१८:००
डाक्टर सुवोध अधिकारी राजधानी सहरको एउटा व्यस्त र सिद्धहस्त सर्जनको नाम हो । उनले झन्डै तीन दशक बिताइसके सर्जरीमा, त्यो पनि वीर अस्पतालजस्तो सधैँ बिरामीको भीडभाड रहने ठाउँमा । कति जनाको ज्यानमाथि चल्यो होला यी सर्जनको ‘स्कालपेल’ ? स्कालपेल अर्थात् सर्जनले प्रयो...
कलेजो प्रत्यारोपणका लागि प्रतिबद्ध डाक्टर
बैशाख २३, २०७४ शनिवार १७:५३:००
नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवाको सुरुवात भयो । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले यसको सुरुवात गरे पनि निरन्तरता भने दिन सकेको छैन । कलेजो प्रत्यारोपणका लागि दाता पाउने सम्भावना अधिक हुन्छ । जिवित व्यक्तिको कलेजको केही भाग काटेर कलेजो खराब भएको मान्छेमा प्रत्यारो...
महिलाको रोगका पहिला पुरुष डाक्टर, जो बाध्य भएर भासिए विदेश
बैशाख १६, २०७४ शनिवार १४:४७:००
डा. विवेक प्रधानले सक्रिय चिकित्सकीय जीवन बेलायतमै बिताए । नेपालमा सेवा दिन नचाहेर होइन, नपाएर उनी २०२५ सालमा बेलायत भासिएका थिए । उतै घरजम गरे । तर, डा. प्रधानको मनबाट नेपालप्रतिको स्नेह भने कहिल्यै घटेन । अवसर पायो कि नेपालका लागि केही गर्न जुटिहाल्थे । विशेष...
मुटुको भल्ब फेरेका यी खेलकुद सेलिब्रिटी जसले जितेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय पदक
बैशाख ४, २०७४ मगलवार ०२:१२:००
स्पोट्र्स भनेपछि सानैदेखि हुरुक्कै हुन्थेँ म । प्लस टु पढ्दा बिहान–बिहान बास्केटबल खेल्थेँ । एक दिन खेल्दाखेल्दै ढलेछु । होसमा आउँदा अस्पतालको बेडमा थिएँ । बिहान केही नखाएकाले कमजोरी भएको हो कि भन्ने सोचेर खाएर मात्र खेल्न थालेँ । फेरि पनि त्यस्तै भयो । त्यसपछि ...
एसएलसी बोर्ड टपर डा. उत्तम, सदैव ‘उत्तम’
चैत २६, २०७३ शनिवार १६:१८:००
नामै उत्तम अर्थात् डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठ । नामजस्तै उनले सदा आफूलाई उत्तमकै लाइनमा उभ्याए । विद्यार्थी जीवनमा पढाइमा निरन्तर उत्तम रहे । चिकित्सामा पनि उत्तमै ठहरिए । अहिले महराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोभास्कुलर थोरासिक एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पनि...
मानसिक स्वास्थ्यका अभियान्ता डा. कपिलदेव
चैत २५, २०७३ शुक्रवार १९:५१:२६
आयुर्वेदमा रोचक शब्दावली छ, भूतविद्या । वैद्यक–चिकित्साका आठ विभागमा यसको चर्चा गरिएको छ । आधुनिक चिकित्सामा त्यसकै नाम हो, मनको उपचार । यसले के भन्छ भने सबैजसो रोगको सम्बन्ध मनसँग जोडिएको हुन्छ । मनमा रोग लागे ज्यान र ज्यानमा रोग लागे मन बिरामी भइहाल्छन् । न...
नेपालमा इन्डोस्कोपी सुरु गर्ने डाक्टर
चैत २०, २०७३ आइतवार १४:५९:००
गुगलमा सर्च गर्दा अहिले धेरैका बारे अनेकथरि जानकारी भेटिन्छन् । चर्चित व्यक्तित्व, समाजका लागि योगदान दिने व्यक्तिका बारेमा नभेटिने कुरै भएन । तर, नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका डा. आइएल आचार्यका बारेमा खोजियो भने उनको नाम बाहेक उनका बारेमा केह...
डा पियाले जब ऋण दिँदा बनाएका तमसुक चंगा बनाएर उडाए
फागुन २१, २०७३ शनिवार १४:४४:००
बन्दीपुरमा कहलिएको व्यापारी घराना पिया परिवार । त्यतिबेला बाग्मती अञ्चलकै धनीमध्येमा नाम आउने परिवारका मदन पियालाई नपुग्दो केही थिएन । त्यसैले हिसाबकिताब गर्न जान्ने गरी पढेपछि बाबुबाजेकै व्यापारतिर लागे भइहाल्थ्यो सन्ततिले । ‘धेरै पढ्नु भनेको जागिर खान हो । जा...
८० बर्से फुर्तिला डाक्टर
माघ २९, २०७३ शनिवार १९:४७:००
उमेरले ८० पुग्न लागे डा. मणिन्द्र रञ्जन बराल । उमेर अनुसार हाम्रो अनुमान थियो, उनी मूलपानी डाँडास्थित घरमा घाम तापेर दिन कटाइरहेका होलान् । उनलाई भेट्नासाथ हाम्रो अनुमानले हावा खायो । छरितो ज्यानका उनी शनिबारलाई विशेष बनाउने तयारीमा थिए । भेट हुनासाथ भने, &...
मेन्टल हेल्थका क्रेजी डाक्टर
माघ १६, २०७३ आइतवार १६:०४:००
स्कुल पढ्दाताका नै रितेश थापाका मनमा अनेक प्रश्न खेल्थे । मानिसले किन फरक–फरक व्यवहार गर्छ ? किन हरेक मानिस भिन्नाभिन्नै स्वभावको हुन्छ ? मानिसले पुरानो कुरा कसरी सम्झिन्छ होला ? किन व्यक्तिपिछे सोचाइ फरक हुन्छ ? जस्ता प्रश्न उनको मनमा आउँथे । यस्तै प्रश्नहरुको घनचक्कर...
यी हुन् पहिलो नेपाली नर्स
माघ १५, २०७३ शनिवार १४:५६:००
पहिलो नेपाली नर्स को हो ? लोकसेवाका परीक्षार्थी प्रायः झुक्किन्छन् । कुनै पुस्तकमा ल्हामु अमात्य छ त कतै डा. उमादेवी दास । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो नर्स घोषणा गर्न लागेको वर्षौं भयो । तर, विवाद टुंग्याउन सकेको छैन । ल्हामुको भौतिक उपस्थिति नभए पनि ८८ वर्षको घामपानी झेलेक...
दरवार हत्याकाण्डका घाइतेको उपचारमा संलग्न सेनाका यी डाक्टर
पुस १८, २०७३ सोमवार १५:५४:००
नेपाली सेनासँग डा. बच्चुराम केसीको पाँच पुस्ता जोडिएको छ । उनको सेनासँगको नाता परिवार जत्तिकै गहिरो छ । उनीभन्दा अघिका तीन पुस्ताले विशुद्ध सैनिकका रुपमा नेपाली सेनालाई योगदान दियो । उनी र उनका कान्छा छोरा विराज केसी भने चिकित्सकको हैसियतमा नेपाली सेनाको छाताम...
सार्कोमा रोगका एक्ला सारथी डा. जनिथ
पुस १६, २०७३ शनिवार १८:३६:५८
सार्काेमा अर्थात् हाडजोर्नी, कुरकुरे हड्डी, नसा, धमनी, मांसपेसीमा हुने क्यान्सर । यो असाधारण प्रकारको क्यान्सरमध्ये पर्छ । अधिकांश क्यान्सरको जोखिममा पाको हुँदै गएका व्यक्ति हुन्छन् तर यो क्यान्सर बालबालिका र युवामा पनि हुने सम्भावना हुन्छ । जीवनशैली र खानपानका कारण निम्तिने...
जाजरकोटको मास्टरदेखि वीर अस्पतालको डाइरेक्टरसम्म
मंसिर २५, २०७३ शनिवार १५:४८:००
डा. दीर्घराज आरसी (रोकाया क्षत्री) को विगत केलाउने हो भने भन्न सकिन्छ– मान्छेको जीवन संयोगहरूको एउटा रोमाञ्चक खेल हो । जाजरकोटको गाउँले केटोदेखि वीर अस्पतालको डाइरेक्टरसम्म वा प्रावि शिक्षकदेखि हाडजोर्नी विशेषज्ञसम्म, जताबाट उनको जीवनयात्रा नियाले पनि, जसरी उनको...